Shabakadda Wararka Amiirnuur – Page 111 – Xog Xaqiiqda Ku Saleysan
Al-Jowlaani : ” Ruushku waxay hilmaami doonaan Jabkii Afghanistan ” (Warbixin+Maqal).
Amiirka Jamaacada Jabhatu Nusrah Sheykh Abuu Muxamed Al-Jowlaani ayaa ku tilmaamay fara-gelinta Ruushka ee Suuriya inuu yahay leebkii ugu dambeeyay ee uu adeegado Nidaamka Bashaar Al-Asad, isagoona sheegay in fara gelintaas ay timid, kadib guulihii is daba joogga ahaa ee Mujaahidiinta Shaam ay kasoo hooyeen dhinaca fagaraayaaha dagaalka, wuxuuna ugu […]
Faah faahin : Diyaarad Saanad Meliteri u siday Amisom oo ku dhacday duleedka Muqdisho.
Diyaarad Meliteri oo shixnad sahay meliteri ah u sidday Ciidamada Shisheeye ee Amisom ayaa caawa fiidkii kusoo dhacday duleedka magaalada Muqdisho. Goob joogayaal ayaa warbaahinta islaamiga ah u sheegay in diyaaraddu ay kusoo dhacday deegaanka “Carbiska” ee duleedka magaalada Muqdisho. Ka hor inta aysan diyaaradda kusoo dhicin duleedka Muqdisho waxay […]
Labadan Sawir is bar bar dhig ku samee!!.
Akhristayaal, labadan Sawir ee hoos ka muuqda waxaad is bar bar dhig ku sameysaan , si aad u ogaataan xaqiiqda dhabta ah ee Xukuumadaha maamula Dalalka Carabta!. Sawirka Midig : Xamza Kaashgari Eedeynta : inuu caayay Allah SWT Ciqaabta : wuxuu ballan qaaday inuu towbad keenayo (waa lasii daayay) Sawirka Bidix […]
DAAWO : Abwaan Hadraawi oo ka hadlaya Xumaanta Qabyaaladda.
Abwaan Maxamed Ibraahiim Warsame “Hadraawi” oo ka mid ah Abwaanada caanka ah ee Soomaaliyeed ayaa xikmadeysan uga hadlay xumaanta Qabyaaladda. Abwaanku waxa uu hadalkan ka jeediyay Munaasabad ka dhacday magaalada Burco ee gobolka Togdheer ee waqooyi galbeed Soomaaliya.
DHAGEYSO : Sheykh Aadan Sunne oo ka hadlay Zino iyo Ribo ku baahaysa Hargeysa.
Sheekh Aadan Sunne oo kamid ah Culimada ku nool Hargaysa ayaa ka hadlay fasahaad ku baahaya Magaalada Hargaysa oo xarun u ah Maamulka Axmed Siinlaayo. Khudbad uu jeediyay ayuu ku sheegay bulshada Muslimiinta inuu camimay fisqi iyo fasahaad ay ku leg leeyihiin shisheeyaha. wuxuu sheegay in khamri lagu dhex cabo […]
Diyaarad ay Lahaayeen Ciidamada Meliteriga Ingiriiska oo Afghanistan kusoo dhacday.
Wasaaradda difaaca ee Dowladda Ingiriiska ayaa xaqiijisay inay soo dhacday diyaarad nooca Helicopter-ka ah oo ay lahaayeen Ciidankeeda jooga dalka Afghanistan. Diyaaraddan ayaa waxay ku bur burtay Garoonka diyaaradaha magaalada Kaabuul ee caasimadda dalkaasi, xilli ay dooneysay inay Garoonka caga dhigto. Warka kasoo baxay Wasaaradda Gaashaandhigga waxaa lagu sheegay in […]
Howl-gallada Kaligii-duulnimada Filastiiniyiinta oo sii socda oo iyo Afar Yahuud ah oo la dhaawacay.
Waxaa sii socda howl-gallada kaligii duulnimada ah ee dhallinyarada Filastiiniyiintu ay ku weerarayaan Askarta iyo Muwaadiniinta Yahuudda ee xoogga ku heysta dhulka Filastiin, iyadoo howl-galkii ugu dambeeyay uu habeenkii xalay ahaa ka dhacay meel ku dhow magaalada Al-Qudus. Nin Filastiini ah ayaa gaari jiirsiiyay Afar ruux oo Yahuud ah, isagoo […]
Allaah baa mahad leh. Ammaan iyo nabadgelyo Nabi Muxamed korkiisa ha ahaato!. Dad badan oo Soomaaliyeed ayaad mooddaa in ay u rumeysan yihiin dhabahaanta calanka Soomaalida lagu aqoon jiray, ee buluugga ahaa xiddigta cadna lahaa iyaga oo aad u malaynayso in ay mararka qaarkood cibaado iyo diin ahaan u aaminsan […]
DAAWO : Farriinta Kolonyada Shuhadada ay u dirayaan Umaddooda.
Afhayeenka Ururweynaha Mujaahidiinta Al-qaacidda, garabka Jaziirad u ekaha India Sheykh Usaama Maxamuud ayaa jeediyay kalimad taczi ah oo ku socota Mujaahidiinta Al-qaacidda ee Jaziiratul Carab. Kalimaddan waa uu Sheykh Usaama Maxamuud uu Mujaahidiinta dalka Yemen ugu tacsiyaynayaa Qaadadii iyo Mashaayiikhdii qaaliga ahaa ee ay ku waayeen duqeymo dalkaas ka dhacay […]
Xarakada Shabaabul Mujaahidiin oo ku baaqday in Yuhuudda la beegsado. (BAYAAN).
Bayaan ku qornaa Luqadaha Carabiga iyo Englishka oo kasoo baxay Maktabka Warfaafinta ee Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab oo cinwaan looga dhigay ” U gar gaara halkii loo dheelmiyay Nabigiina”” ayaa waxaa markii ugu horreysay looga hadlay howl-gallada xoog ku galka ah ee Yuhuuddu mudooyinkii lasoo dhaafay ku galayeen Masjidka barakeysan ee […]